CNLD Kong Fianternak (Dal-1nak): By Salai Ceu Bik Thawng – Chuncha News
CNLD kong fianternak(Dal-1nak); Miphun caah share zong bawmh khawh ka si pumpak ruahnak tete zong comment in hun ceih le hal chap cio khawhasi lai)J(Miphun party kong zarhkhat voi 2/3 in ka hun post cang lai. Cucaah ka FB friend pawlasiarem lomi nih hrial chung khawh ka si lai
CNLD, NLD le USDP Party Kan Idannak (Zohkheknak) CNLD အကြောင်း ရှင်းလင်းချက် (အပိုင်း-၁) (ချင်းပါတီအကြောင်းကို တစ်ပတ် ၂/၃ကြိမ်လောက် ပုံမှန်တင်ပြပါမယ်။ Friend များသည်းခံနားလည်ပေးကြပါနော်။ အမျိုးသားပါတီအားပေးသူများ Share ဖြင့်ကူညီလို့ရတယ်။ အမြင်သဘောထားများလည်း comment မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေး၊ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်)။
NLD, USDP နှင့် CNLD ပါတီ ကွာခြားချက်(နှိုင်းယှဉ်ချက်)-(အောက်မှာ ဗမာစာနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်)။Ramkhel lei fimthiammi nih ramkhel party hi phun thum in an tthen –Phunkhatnak cu ‘charismatic parties’ tiasi i cucu minung pumpak/hruaitu pakhat minthannak cungah aa hngatmi/dirhmi party tinakasi. Tahthimhnak ah NLD. Minung pakhat cungah aa hngat caah cu pa/nuaum ti lo tikah an kuai/thi tawn. (Tck. AFPFL party cu Aung San in hrambunhmiasi caah amah um ti lo hnu ah an phu2ah an kuai colh).
Adang phunkhat cu ‘clientelistic parties’ tiasi i cucu atu UDP le USDP party bantuk hi an si– afawinak cun ‘hlawhfa’ party. Hmuhtheihnak ruahchan in dirh/fuhmi an si caah (money/power)aum ti lo cun an thi/tiau ve. (Tck. NUP party-1990 cuaphaisa le power tihnaareu caah capawl duah bangaciam. Cuvebantuk in USDP zong nitlak leiapanh cuahmah). A pathumnak party phun cu ‘programmatic parties’ tiasi i anih cu ‘minung/hruaitu’ le ‘phaisa/nawlngeihnak’ ah si loin pawlasi le ideology ah hram bunhmi partyasi– cucu CNLD miphun party bantuk.
(NLD le USDP he kan policy zeidah aa dang timi kha point-10 in kan peh/fianter tthan te lai). NLD, USDP နှင့် CNLD ပါတီ ကွာခြားချက်# နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များက နိုင်ငံရေးပါတီကို (၃)မျိုးခွဲထားပါတယ်။ #ပထမအမျိုးအစားက… charismatic parties ဆိုတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်/ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအပေါ်မှာ အခြေပြုတဲ့ ပါတီမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သာဓကအားဖြင့် NLD ပါတီမျိုးပေါ့။ တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်မှီခိုနေ ရတဲ့အတွက် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အခါ ပြိုကွဲတတ်တယ်၊ Sustainable မဖြစ်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မရှိတော့တဲ့အခါ ဖ.ဆ.ပ.လပါတီ နှစ်ခြမ်းကွဲသလိုမျိုးပေါ့။
#ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ clientelistic parties လို့ခေါ်ပါတယ်။ လုပ်သားပါတီ ဆိုပါတော့။ သာဓက- ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ။ ပါတီမှာ ပါဝင်တယ်ဆိုတာ အကျိုးအမြတ် မျှော်လင့်လို့။ ဒါကြောင့် အဲဒီပါတီမှာ ငွေနဲ့အာဏာ(money&power) မရှိတော့တဲ့အခါ(အလားအလာမရှိတော့တဲ့အခါ)မှာ ပါတီဝင်များ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားတတ်တယ်။ တ.စ.ည(NUP)ပါတီ ပြာကျသွားသလို ကြံ့ဖွံ့ပါတီလည်း နေဝင်ဘက် ဦးတည်သလိုပေါ့။
#တတိယအမျိုးအစားမှာ programmatic parties ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ပေါ်လစီ၊ ၀ါဒနဲ့ နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်ကို အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ပါတီမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သာဓက-ချင်းပါတီ(CNLD)။
ချင်းပါတီကတော့ လူ/ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးကောင်းတစ်ယောက်ကောင်းအပေါ် အခြေခံထားတဲ့ ပါတီမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီခေါင်းဆောင်များမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်း ဘာမှပြသနာမရှိ(ပိုတောင် ကောင်းနိုင် သေးတယ်)။ ချင်းလူမျိုးတည်ရှိသရွေ့တည်ရှိမယ့်ပါတီ။ ငွေကြေးနဲ့အာဏာလိုချင်လို့ပါဝင်ခြင်းမဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ဓတ်ကျစရာ ဘာမှမရှိပေ။
NLD နဲ့ USDP (ဗမာပါတီ)မှာ ပါဝင်တဲ့သူခပ်များများ(အထူးသဖြင့်ချင်း NLD နှင့် USDP)မှာ ပါတီမှာ ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လစာ၊ အထောက်အပံ့နဲ့ အကျိုးအမြတ်တစ်ခုခုကို မျှော်လင့်သူများဖြစ်ကြတယ်–အများအားဖြင့်။ ပြောင်းပြန်အားဖြင့်… ကျွန်တော်တို့ ချင်းပါတီဝင်များကတော့ ပါတီမှာ ကိုယ်တိုင် ငွေကြေးစိုက်ထုတ်၊ အနစ်နာခံ၊ ပေးဆပ်နေရတယ်။ ပါတီက တစ်ပြားတစ်ချက်မှ အထောက်အပံ့မရသလို မျှော်လင့်ချက် မထားကြပေ။
ခြုံငုံပြောရရင်— ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာ ဖွံ့ဖြိုးရေး(development)ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ NLD party ကတော့ ဒီမိုကရေစီအရေး(democracy)ပါတီ။ ချင်းပါတီကတော့ ဖက်ဒရယ် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် (Federal, Self-determiantion)အတွက် တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာ ဘယ်ပါတီတက်တက် လုပ်လို့ရတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာလည်း အသွင်းကူးပြောင်းမှု ချော်မွေ့သွားပြီ။ တပ်မတော်က အာဏာပြန်သိမ်းစရာအကြောင်း မရှိတော့ချေ။ ဒါကြောင့် ဒီချိန်ဟာ ချင်းအမျိုးသား တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပင်လုံအခွင့်အရေး ပြန်ရယူဖို့အချိန်ဖြစ်ပါပြီ။ (NLD, USDP နဲ့ CNLD ပါတီတို့… မူဝါဒဘာကွာခြားသလဲ…ဆိုတာကို ၁၀-ချက်ဖြင့် ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်)။ Catialtu; Salai Ceu Bik Thawng